Papa's Donuteria To Go! 1.0.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Papa's Donuteria To Go!
Papa's Donuteria To Go! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကြော် သွား. ရန် Papa ရဲ့ Donuteria အတွက်အရသာဒိုးနက်အစေခံ!
- ဂိမ်းအကြောင်း -
သင်ရုံ Powder ပွိုင့်များ၏ whimsical မြို့မှာ Papa ရဲ့ Donuteria မှာအလုပ်သစ်တယ်! အဆိုပါလစာနှင့်အကျိုးအမြတ်ကောင်းတဲ့သော်လည်း, သင်မှန်ဆိုင်အပြင်ဘက်အပန်းဖြေပန်းခြံအဘို့အကြောင်းမှာပါတဲ့လိုင်း-ဤနေရာသို့သွားရန် Pass ကိုများအတွက်အလုပ်အကိုင်အယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသော်လည်းအားလုံးပျော်စရာနှင့်ဂိမ်းများမဟုတ်ဘူး: ယခုသင်သည်လည်းဒီပွဲတော်ကဲ့သို့မြို့မှာရှိတဲ့အရူးဖောက်သည်အားလုံးအတှကျနေ့တိုင်းအရသာဒိုးနက်ချက်ပြုတ်ဖို့ရှိသည်။
သင်က fryer ၌သူတို့ကိုဆမ်းထို့နောက်မုန့်စိမ်းနှင့်ပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုးသုံးပြီးဒိုးနက်ကိုပွငျဆငျပွီးသူတို့ပဲညာဘက်င်သည်အထိနှစ်ဖက်စလုံးချက်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖောက်သည်သူတို့ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်မတိုင်မီအရသာဖြည့်ပါ, icing နှင့် toppings နှင့်အတူအရသာဒိုးနက်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ ပထမဦးစွာအချိန်ဧည့်သည်ပဲကြိုးစားရန်တဦးတည်းဒိုးနတ်အမိန့်, ဒါပေမယ့်ဖောက်သည်အလုံအလောက်မရနိုင်သလိုသူတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာပိုပြီးဒိုးနက်မိန့်စတင်ပါလိမ့်မည်ပြန်လုပ်ပါစေ! အမှုန့် Point ကိုလည်းကွဲပြားခြားနားသောအားလပ်ရက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကျင်းပဒါကြောင့်သင်အားလပ်ရက်မှတဆင့် play အဖြစ်အသစ်သောပွဲလမ်းသဘင်ပါဝင်ပစ္စည်းများသော့ဖွင့်ဖို့အဆင်သင့်ရ!
- GAME အင်္ဂါရပ်များ -
feature အသစ် - Papa ရဲ့စားသောက်ဆိုင်၏အခြားဗားရှင်းအနေဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံး features တွေအားလုံးသေးငယ် screen များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့် reimagined, ဂိမ်း "Go စေရန်" ဒီမှာရှိတဲ့ယခုရရှိနေပြီဖြစ်သည်!
HOLIDAY မှအရသာ - အရသာအားလပ်ရက်အရသာနှင့်အတူ Powder ပွိုင့်များတွင်ရာသီအခမ်းအနားကျင်းပ! သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ရာသီအလိုက်ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်မူးဝြေခင်းခင်းကျင်းနှင့်အတူဒိုးနက်အမိန့်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေဖြင့်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ဦးချင်းစီအားလပ်ရက်များအတွက်အသစ်ကဒိုးနတ်ပုံစံမျိုးစုံ, ဖြည့်ပါ, icing, မိုးဖွဲများနှင့် toppings သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်, သင်၏ဖောက်သည်သစ်ကိုအရသာအရသာကြိုးစားနေခစျြလိမျ့မညျ။
အထူးချက်ပြုတ်နည်းများအမှုတော်ကိုထမ်းရွက် - သင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အထူးချက်ပြုတ်နည်းရယူနိုင်သော, နှင့် Donuteria အတွက်နေ့စဉ်အထူးကဲ့သို့သူတို့ကိုအစေခံ! တစ်ခုချင်းစီကိုအထူးသင်စာရွက်တစ်သုဒ္ဓဥပမာအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဘို့ဝင်ငွေနိုငျဆုကြေးငွေရှိပါတယ်။ အထူးဆုချီးမြှင့်ဝင်ငွေမှတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အထူးကျွမ်းကျင်!
သင့်ဝန်ထမ်းကိုစိတ်ကြိုက် - ထိုဒိုးနတ်ဆိုင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တိုနီသို့မဟုတ်စကူတာအဖြစ် Play, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံဇာတ်ကောင်ဖန်တီး! သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အလုပျသမားမြားအတှကျအားလပ်ရက် Company နှင့်အဝတ်အစားများအကြီးအကျယ်အမျိုးမျိုးနှင့်သင်၏အားလပ်ရက်ဝိညာဉျကိုချွတ်ပြသနိုင်ပါတယ်။ အဝတ်အစားများတစ်ဦးချင်းစီကို item များအတွက်ထူးခြားသောအရောင်ပေါင်းစပ်ရွေးကောက်သဖြင့်, ပေါင်းစပ်သန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ဖန်တီး!
အထူး Delivery - တချို့ကဖောက်သည်သူတို့ရဲ့ဒိုးနတ်ပြင်ဆင်ချက်အရအားလုံးလမ်းအပန်းဖြေပန်းခြံမှလာချင်ကြပါဘူး! သငျသညျကိုဖုန်းအမိန့်ကိုယူပြီး start အခါ, ဖောက်သည်များကသူတို့ဒိုးနတ်အလို့ငှာနေရာခေါ်နိုင်ပါတယ်, သင်မယ့်အစားသူတို့ရဲ့အိမ်တွေအမိန့်ယူကယ်နှုတ်ကိုကူညီတဲ့ယာဉ်မောင်းငှားရမ်းမယ်!
စတစ်ကာကောက်ယူခြင်း - သင်၏စုဆောင်းမှုအဘို့အရောင်စုံစတစ်ကာများဝင်ငွေကစားနေစဉ်တာဝန်များကိုနှင့်အောင်မြင်မှုများအမျိုးမျိုးဖြည့်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဖောက်သည်သုံးအကြိုက်ဆုံးစတစ်ကာများအစုတခုရှိပါတယ်: တစ်ခုကိုဖောက်သည်တို့အားပေးဖို့အားလုံးကိုသုံးရယူနိုင်သောနှင့်သင်တစ်ဦးအသစ်စက်စက်မတ်မတ်နှင့်အတူဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မယ်!
ဆိုင်ကိုအလှဆင် - ရေးရာပရိဘောဂများနှင့်ယခုနှစ်အသီးအသီးအားလပ်ရက်များအတွက်အလှဆင်အတူ Donuteria လော်ဘီ Customize! ရောထွေးနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးစတိုင်များကိုက်ညီခြင်းသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များကသူတို့စားစရာဘို့ကြာကြာစောင့်ဆိုင်းစိတ်ထဲမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်လက်ရှိအားလပ်ရက်ကိုက်ညီသောပစ္စည်းများထည့်ပါ။
ကူပွန် CLIPPING - သင့်အကြိုက်ဆုံးဖောက်သည်ပျောက်ဆုံးနေ? သင့်ရဲ့ဖော်ရွေစာပို့သမား, ဗင်းဆင့်၏အကူအညီဖြင့်ထိုသူတို့တစ်ကူပွန် Send! ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးသဘောတူညီမှုကိုချစ်နှင့်ချက်ချင်းအခြားအစားအစာမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကူပွန်စတစ်ကာများနှင့်ဗျူဟာမြောက်ဖောက်သည်တက်အခုလဲအဘို့အ Quest များဖြည့်စွက်အဘို့ကြီးသောများမှာ!
နေ့စဉ် mini-ဂိမ်းများ - သင့်လော်ဘီနှင့်သင့်အလုပျသမားမြားအတှကျသစ်ကိုအဝတ်အစားအသစ်ပရိဘောဂဝင်ငွေမှတစ်ဦးချင်းစီလုပ်အားခပြီးနောက် Foodini ရဲ့နာမည်ကျော် Mini ကို-အားကစားပြိုင်ပွဲ Play ။
- နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်များ -
- လက်ကမ်းအပေါ် Papa Louie ဝဠာတှငျဒိုးနတ်ဆိုင်
- touchscreen များအတွက်ဒီဇိုင်းအားလုံးအသစ်ကထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဂိမ်း features တွေ
-, ကြော်ပြင်ဆင်နေဖြည့်စွက်ခြင်း, topping အကြား Multi-အလုပ်တခုကို
- သော့ဖွင့်ဖို့ 12 သီးခြားအားလပ်ရက်ပိုမိုပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအသီးအသီး
- 40 ထူးခြားတဲ့အထူးချက်ပြုတ်နည်းရယူနိုင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်
- 90 ရောင်စုံစတစ်ကာများဖြည့်တာဝန်များကိုများအတွက်ဝင်ငွေ
- 121 ဖောက်သည်ထူးခြားတဲ့အမိန့်နှင့်အတူအစေခံရန်
- သော့ဖွင့်ဖို့ 117 ပါဝင်ပစ္စည်းများ
Papa's Donuteria To Go! အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Papa's Donuteria To Go! အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Papa's Donuteria To Go! အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Papa's Donuteria To Go! အား အခ်က္ျပပါ
davdavdavdavdav စတိုး 23 47.77k
Papa's Donuteria To Go! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Papa's Donuteria To Go! အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.flipline.com/privacy.html
Papa's Donuteria To Go! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ